Fitakiana tambin-karama :: Manohy ny fitokonany ireo mpianatra ho mpitsabo • AoRaha
Fitakiana tambin-karama Manohy ny fitokonany ireo mpianatra ho mpitsabo
Roa andro izay no nanomboka nito­kona ireo ampahana mpianatra ho mpitsabo na “interne”. Maro tamin’izy ireo no nampiato ny asany, tetsy amin’ny Hjra mano­kana, omaly.
Ho an’ny tao amin’ny sam­pana vonjy aina, dia ireo “internes” rehetra mihitsy no tsy tonga niasa. Nahatsikaritra an’io fahabangan’ireo mpia­natra ireo io ireo fianakaviana sasany nitondra marary teny amin’ity sampandraharaha ity. Voalaza fa efa nilahatra efa ela izy ireo vao voarain’ ireo mpitsabo ny havany. Manamafy ny maha zava-dehibe ny asa hataon’izy ireo eny amin’ny hopitaly ny mpia­natra avy amin’ny sampandraharaha iray ao amin’ny Hjra.
“Raha ny ao amin’ny sampana vonjy aina, ohatra, ny mpianatra no manao fizahana maika amin’ny fandrai­sana an’ireo marary, mialoha ny handefasana azy ireo any amin’ny sampandraharaha hisahana ny tena fitsaboana. Misy fahabangana be sy faha­taran’ny asa, noho izany, ny fiatoan’ireo mpianatra mpitsabo”, hoy ny mpianatra iray mbola niandry raharaha teny amin’ ny hopitaly, omaly. Etsy an-da­nin’izay, nanamafy ny mpitsabo teo anivon’ny sampana vonjy aina fa vitan’izy ireo hatrany ny fikarakarana ara-dalàna ny marary na tsy teo aza ireo “interne”. “Tamin’ny alaka­misy no nantsoina izy ireo hanampy sao sanatria misy olona maro miditra aty amin’ny vonjy aina noho ny fijerena ny baolina”, hoy io mpitsabo io.
Tsiahivina fa efa vita ny fombafomba amin’ny fandoa­vana ny tambin-karama takian’ ireto mpianatra ireto, na dia somary mihisatra aza ny fivoa­han’ny vola. “Efa nalamin’ny minisitera tompon’andraikitra rehetra ny fandoavana ireo tambin-karama ireo fa tsy hoe tsy haloa akory. Anisan’ny olana ny fikarakarana ireo taratasy mikasika izany satria miova isan-taona ny lisitr’ireo mpia­natra misitraka azy. Ny fahadi­soana, na dia ny anaran’ny iray amin’ireo fotsiny aza anefa dia mety hitarika famerenana an’izany hatramin’ny voalohany indray ”, hoy ny profesora Rakoto Alson Aimée Olivat, talen’ny Hjra, omaly.
Seho tokana eto Iarivo :: Hiaka-tsehatra etsy amin’ny CCEsca i Farakely
Famerenana ny fitokisam-bahoaka :: Tsy hitsitsy an’ireo mpambotry firenena ny governemanta